Samaynta qaab cusub oo horumarineed bir wanaagsan waa in loo adeegsadaa "daab" -Falaysigii lala yeeshay Luo Tiejun, Madaxweyne Ku-xigeenka Shiinaha ee Ururka Birta iyo Birta - Shiinaha Foshan Hermes Steel
Dhisida hannaan horumarineed oo bir wanaagsan ah waa in loo adeegsadaa "daab" -Golaysi lala yeeshay Luo Tiejun, Madaxweyne Ku-Xigeenka China Iron and steel Association
Marka loo eego qaabka cusub ee horumarinta, warshadaha biraha waa inay ka qabsadaan fursado cusub mustaqbalka sameynta isku dheelitir cusub oo ah sahayda gudaha iyo baahida iyo ka qeyb qaadashada iskaashiga heer caalami ah iyo tartanka. ” Luo Tiejun, oo ah madaxweyne ku xigeenka ururka birta iyo birta ee Shiinaha ayaa ku sheegay waraysi gaar ah oo uu siiyay wakaalada wararka ee Xinhua goor dhaweyd. Nadiifinta dib-u-habeynta qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka "13-ka Shanta Sano ee Qorshaha" ayaa hor istaagtay tijaabada culeyska sanadka qaaska ah ee 2020. Warshadaha birta, oo taagan barta bilowga cusub ee horumarka, waxay sii wadi doonaan dib u habeyn xeel-dheer iyo si tartiib tartiib ah u hagaajiya awoodaha aasaasiga ah ee warshadaha iyo heerka casriyeynta silsiladda warshadaha. Qaado ikhtiraaca cilmiga iyo teknolojiyada oo ah barta laga bilaabayo si loo wanaajiyo tayada iyo heerka waxsoosaarka, oo ha loo ogolaado bir wanaagsan in lagu isticmaalo "daab".
"Ma fileynin!" Luo Tiejun wuxuu dib uxasuustey sanadkii lasoo dhaafay ee 2020, “Runtii waxaan ka walwalsanahay in silsiladda raasamaalka ee shirkaddu ay jabto oo warshaduhu lacag ku waayaan. Natiijo ahaan, ma jiro wax khasaaro ah bil gudaheed. Kaliya waxay ku xiran tahay inta macaash ah. ”
Xogta Xiriirka Birta iyo Birta ee Shiinaha waxay muujineysaa in sanadka 2020, macaashka shirkadaha birta ah ee lagu soo daray tirakoobyada muhiimka ah ay kordhayaan sanadba sanadka ka dambeeya bisha Juun, iyo saamiga hantida-masuuliyadeed ayaa sii waday inuu hoos u dhaco sanadba sanadka. Wadarta macaashka la gaarey sanadka oo dhan wuxuu ilaaliyay koritaanka.
"Sanadkii la soo dhaafay, soo kabashada joogtada ah ee dhaqaalaha Shiinaha waxay ku riixday warshadaha birta inay ka bataan wixii laga filaayay." Luo Tiejun ayaa yiri, “Qodob kale oo muhiim ah waa dib u habeynta qaab dhismeedka. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, shirkadaha biraha sameeya waxay sameeyeen lacag, xaaladdooda caasimaddana si weyn ayey u soo hagaagtay. ”
Luo Tiejun wuxuu aaminsan yahay in warshadaha biraha ay muujiyeen awoodaha ka hortagga halista oo ay ugu wacan tahay horumarka aan kala go 'laheyn ee dhanka dib u habeynta qaab dhismeedka iyo faa iidooyinka silsiladaha warshadaha oo dhameystiran sanadihii la soo dhaafay.
Faa'iidooyinkaas waxaa lagu xaqiijin doonaa sannadka 2020 marka faafidda cudurku ku fido. Sannadka 2020, dhinac, warshadaha birta ee dalkaygu waxay door muhiim ah ka ciyaareen gurmadka degdegga ah, gargaarka caafimaadka, dib u bilaabidda shaqada iyo wax soo saarka, iyo xasilinta silsiladda sahayda warshadaha; Dhinaca kale, baahida iyo soo saarida waxsoosaarka warshadaha birta Shiinaha ayaa labaduba gaadhay rikoor aad u sareeya Isla mar ahaantaana, waxay horseeday koror la taaban karo ee soo dejinta biraha, iyo soo dejinta wejiga saafiga ah ee birta cayriin ayaa bilaabay inay samaysmaan laga bilaabo Juun.
Shiinaha oo ah dalka ugu badan ee soo saara biraha, Shiinaha kaliya ma uusan cadaadis saarin awooda wax soo saar ee adduunka, laakiin wuxuu siiyay suuq ballaaran oo lagu dheefshiido awoodda wax soo saarka birta adduunka, ”ayuu yiri Luo Tiejun.
Markaan dib u milicsano 2020-ka aan caadiga ahayn, waxsoosaarka birta waddankeygu wuxuu kusii socday heer sare oo ay keeneen dalab hoose oo xoog leh, taasoo muujineysa adkeysiga xooggan ee dhaqaalaha dalkayga; isla mar ahaantaana, qiimaha macdanta birta laga soo waarido ay si aad ah isu bedbedashay, mar labaadna ku dhufatay dhibcaha xanuun ee warshadaha. Farxadaha iyo walwalka warshadaha birta iyo birta ayaa ah uun astaan ​​muujineysa soo gelitaanka dalkayga marxalad cusub oo horumarineed iyo isbeddelo cusub oo xagga fursadaha iyo caqabadaha ah.
Isaga oo taagan barta cusub ee laga bilaabayo "14-ka sano ee qorshaha shanta sano ah", sidee ayay warshadaha biraha u soo kaban kartaa ceebaha ay leeyihiin oo ay si wanaagsan ku bilaabi karaan?
Luo Tiejun wuxuu tilmaamay in ujeedada fidinta awooda, caqabadaha sii kordhaya ee cimilada deegaanka, ku tiirsanaanta sare ee ilaha dibada, iyo uruurinta warshadaha oo hooseeya ay wali noqon doonaan caqabado hortaagan warshadaha birta in mudo ah. "Warshadaha biraha wali waxaa ka dhiman cilladaha ay u baahan yihiin si loo dardargeliyo dhismaha nidaamka kartida aasaasiga ah ee warshadaha iyo dhismaha silsilad warshadeed oo casri ah."
“In la wanaajiyo qaabka warshadaha waa mid aad muhiim u ah in la xoojiyo awooda aasaaska warshadaha. Caqabadaha xagga macdanta birta awgeed, sanadihii ugu dambeeyay, shirkadaha cusub ee birta ee dalkeyga waxay u janjeeraan inay horumar ka gaaraan xeebta. ” Luo Tiejun wuxuu yiri, tani waa xeebta xeebta xeebaheeda, kharashka saadka, iyo dammaanad qaadka alaabta ceeriin Natiijada lama huraanka ah ee faa'iidooyinka badan sida awooda deegaanka.
Laakiin wuxuu sidoo kale tilmaamay in wax ka beddelka qaab-dhismeedka warshadeed ee warshadaha birta iyo birta aan lagu "badin karin". Khadka hoose ee laba-geesoodka ah waa inuu noqdaa baahida suuqa gobolka iyo kheyraadka iyo awooda deegaanka, iyo isku dheelitirka dhammaan qaab-dhismeedka warshadaha waa in la tixgeliyaa iyadoo lagu saleynayo in kor-u-kaca iyo hoos-u-dhaca silsiladda warshadaha ay si buuxda isugu xirnaan karaan.
"Warshadaha biraha waa inay bedelaan fikirka isku-filnaanshaha soo jireenka ah, yareeyaan dhoofinta wax soo saarka guud, dhiirigeliyaan soo dejinta alaabada birta aasaasiga ah sida billets, ayna yareeyaan isticmaalka tamarta iyo macdanta birta." Luo Tiejun wuxuu yiri warshadaha birta waxay sii xoojin doonaan dib u habeynta qaab dhismeedka dhanka wax soosaarka isla markaana si adag ayey u xakamayn doonaan yareynta. Awoodda wax soo saarka birta ceyriin, qoto dheer beerashada waddada horumarinta cagaaran iyo kaarboon-hoose, taasoo horseedaysa sahay cusub oo gudaha ah iyo isu-dheelitir dalab oo leh tayo sare leh, iyo ka-qaybgalka iskaashiga heer caalami ah iyo tartanka.
Luo Tiejun wuxuu yiri iyadoo la soo bandhigayo taxane ah siyaasado laxiriira iyo hagaajinta nidaamka sida bedelka awooda, soo dejinta alaabta ceyriinka ee birta dib loo rogay, iyo kaarboonka sare, warshadaha birta iyo birta waa inay adeegsadaan hababka lagu hormarinayo isku biirista iyo dib u habeynta iyo hagaajinta dib-u-warshadaynta qashinka birta si qumman loo geeyo meelaha xeebta iyo kuwa gudaha ah. Awoodda wax soosaarka, si joogto ah kor ugu qaadista iskaashiga awoodda wax soo saar ee caalamiga ah, si tartiib tartiib ah u wanaajisa awoodaha aasaasiga ah ee warshadaha iyo heerka casriyeynta silsiladda warshadaha, una adeegsato hal-abuurnimo cilmiyaysan iyo teknolojiyad ahaan xoog muhiim ah oo lagu hagaajinayo tayada iyo heerka sahayda, si bir wanaagsan loo helo waxaa loo isticmaali karaa "daab".
Mustaqbalka wajahaya, waa maxay "daab" loogu talagalay warshadaha birta?
Luo Tiejun wuxuu yiri waa lagama maarmaan in laga faa'iideysto fursadaha iyadoo lagu saleynayo istiraatiijiyadda aasaasiga ee ballaarinta baahida gudaha. Horumarinta xoogga leh ee 5G + warshadaha Internetka, maalgashiga dalkayga ee kaabayaasha cusub iyo waxsoosaarka horumarsan ayaa sii kordhaya, taas oo sii wadaysa dhiirrigelin cusub oo ku aaddan kor u qaadista baahida birta ee warshadaha birta ee hooseeya sida baabuurta, qalabka guryaha, iyo alaabada casriga ah.
"Isku biirida iyo dib u habeynta silsiladaha wabiga ee kor iyo hoos waa dalab cusub oo loo qabo warshadaha birta si loo xaqiijiyo horumarka warshadaha iyadoo la raacayo hannaanka cusub ee horumarka." Luo Tiejun wuxuu carabka ku adkeeyay inay lagama maarmaan tahay in la dadajiyo isku biiritaanka iyo dib u habeynta warshadaha dhexdooda, lana sii wado kobcinta iskaashiga hal abuurka leh ee shirkadaha sare iyo kuwa hoose ee silsiladaha warshadaha si loo xoojiyo kor u qaadida shirkadaha hoose iyo machadyada cilmi baarista ayaa iska kaashanaya sidii loo casriyeyn lahaa si loola kulmo baahida isticmaalayaasha oo fidiya oo xoojiya silsiladda warshadaha.
Wuxuu yiri "Hindisaha Belt iyo Waddo" wuxuu horseedayaa furitaan heer sare ah, sidoo kale wuxuu u keenayaa fursado cusub shirkadaha birta ah inay "adduun u baxaan". Warshadaha biraha waxay leeyihiin astaamaha xoojinta maalgashiga sare iyo ku xirnaanshaha warshadaha oo xoog leh, waana kaqeybgale lama huraan ka ah dhismaha tayo sare leh ee wadajirka ah "Belt iyo Wadada".
"Iskaashiga awoodda caalamiga ah waa mid ka mid ah siyaabaha muhiimka u ah warshadaha birta Shiinaha si ay u raadsadaan isbeddel iyo casriyeyn." Luo Tiejun wuxuu sheegay in shirkadaha biraha ay tahay inay si buuxda u fahmaan fursada dib u qaabaynta silsiladda warshadaha adduunka, isla mar ahaantaana ay si caqli gal ah u qiimeeyaan booska iskaashiga awoodaha caalamiga ah, kordhinta isuduwidda iyo iskaashiga, isla markaana aqoonsadaan meeleynta iskaashatada, xoojinta ka hortagga halista, kuna dadaasho abuurista faa iidooyin caalami ah oo cusub oo caalami ah oo leh iskaashi heer caalami ah oo tayo sare leh leh.